जापानी प्रधानमन्त्री आबेलाई इजरायलमा जुत्तामा खाने दिएपछि…. | Rajmarga
जापानी प्रधानमन्त्री आबेलाई इजरायलमा जुत्तामा खाने दिएपछि….
Chocolate selection from the world ? by #SegevArt ⭐⭐⭐⭐⭐ / A metal shoe by @tomdixonstudio
जापानी संस्कृतिमा जुत्ता
जापानमा लामो समयसम्म रहेका एक जना बरिष्ठ कुटनीतिज्ञले इजरायली पत्रिका येदियोत अहरानोतसँग भने –यो एउटा असंवेदनशील र बेवकुफीपूर्ण निर्णय थियो ।
उनले भने–जापानी संस्कृतिमा जुत्ताभन्दा बढी तुच्छ केही पनि हुँदैन । जापानीहरु आफ्नो घरमा मात्र होइन कार्यालयमा पनि जुत्ता बाहिर जुत्ता खोलेर छिर्छन् । यहाँसम्म कि जापानी प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्री र सांसद पनि आफ्नो कार्यालयमा जुत्ता लगाएर जाँदैनन् । यो त्यस्तै हो जस्तो कुनै यहुदी पाहुनालाई सुगुरको आकारमा खाना प्रस्तुत गरिन्छ ।
एक जना जापानी कुटनीतिज्ञले येदियोतसँग भने–कुनै पनि संस्कृतिमा जुत्ता टेबुलमा राखिँदैन । अन्ततः भान्सेको दिमागमा के चलिरहेको थियो । यदि यो ठट्टा थियो भने हामीलाई यो रोचक लागेन । हामी आफ्नो प्रधानमन्त्रीका साथ भएको यसप्रकारको व्यवहारबाट रुष्ट छौ ।
भान्से सेगेभले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्रोफाइलमा डिनरसँग सम्बन्धित तस्वीर पोस्ट गरेका छन् । जसमा जुत्तामा प्रस्तुत गरिएको डेजर्ट पनि समावेश छ।
एक सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले तस्वीरमा टिप्पणी गरेका छन् –तपाईले सबैभन्दा ठुलो गल्ती गर्नुभयो ।
एक जना अन्य युजरले लेखेका छन्–यो जापानले कहिले पनि भूल्न सक्ने छैन । सेगेभ म तिमीलाई निकै माया गर्दथेँ तर तिमीले हामी सबैलाई लज्जाबोध गरायौं ।
कयौ अवार्ड जितिसकेका भान्से अर्थात शेफ सेगेभ इजरायलको मुख्य रेष्टुरेन्टका मालिक हुन् । उनले कयौ पुस्तक लेखिसकेका छन् । र उनी टेलिभिजन सेलिब्रेटी पनि हुन् । उनी ईआई एआई एयरलाइन्सका मुख्य भान्से पनि हुन् ।
शिन्जो आबे जब २०१५ मा पहिलोपटक इजरायल गएका थिए तब उनी यस्तो गर्ने पहिलो प्रधानमन्त्री थिए । आबे र नेतन्याहुको भेटघाटका क्रममा उत्तर कोरिया, इरान, परमाणु सम्झौता र इजरायल–प्यालेस्टाइनी शान्तिवार्ताका विषयमा छलफल भएको थियो । बीबीसी हिन्दीबाट
Previous post: म्याद सकिएको औषधि दिएको भन्दै स्वास्थ्य चौकीमा तालाबन्दी, स्वास्थ्यकर्मीले मागे माफी
Next post: ट्र्याक्टर पल्टिँदा बालकको मृत्यु, १९ जना घाइते
प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य खतरामुक्त, अझै एक साता अस्पतालमै बस्नुपर्ने
चीनको गुइझो प्रान्तमा नदीमाथि बनेकाे उच्च गतिकाे रेलमार्ग